सावुनपानी प्रयोग गर्ने कि स्यानिटाइजर ? - सिम्रिक खबर
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुनु भन्दा अघिको हाम्रो दैनिक कार्यशैली र हालको कार्यशैलीमा आकाश पातालको फरक बनेको छ । हाल मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने कार्य हाम्रो जीवनमा निकै बढेको छ।यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता जस्तै हो । किनकी यी उपायहरु अपनाइएन भने हामीलाइ कोरोनाभाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ । कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी सङ्कटका रूपमा देखिएपछि मनतातो पानीमा कम्तीमा २० सेकेन्ड साबुन लगाएर हात धुने कुरा धेरै दोहो¥याइएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हात धुने ठीक तरिका भन्दै विभिन्न सामग्रीहरू तयार पनि पारेको थियो। डब्लुएचओका अनुसार हामीले साबुपानीले कम्तीमा २० सेकेन्ड सम्म हात धुन जरुरी छ ।
२० सेकेन्ड नै किन? इथियोपियामा गरिएको एउटा अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजामा अस्पताल पुग्ने एक हजार जना जनामध्ये एक प्रतिशतभन्दा कमले मात्र सही तरिकाले हात धुने गरेको पाइएको थियो । अमेरिकाको नर्थईस्टर्न युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक थोमस गिलभर्टका अनुसार कोरोनाभाइरसको रसायनिक संरचनालाई विथोल्न साबुन र तातो पानीले जस्तो अरू केही कुराले सक्दैन। “यो भाइरसको आणुवंशिक पदार्थलाई घेर्ने एकखाले झिल्लीहरू हुन्छन्। तिनको संरचना चिल्लो हुन्छ,“ गिलभर्ट भन्छन्। “यो त्यस्तो संरचना हो जसलाई साबुन र पानीले कमजोर पार्छ।“ साबुनपानीले हात राम्ररी धुने गर्दा भाइरसको आणुवंशिक संरचना अर्थात् आरएनए मर्न जान्छ र यो मानिसमा विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको साबन पानी नै हो । गिलभर्टको भनाइ छः “हात धुने समय घटाउने बाहेक मैले यसबारे केही गुनासो सुनेको छैन। बीस सेकेन्ड भनेको हातमा साबुन दल्न र मिच्नका लागि हो।“ त्यो समयमा तातोपानी प्रयोग गर्न सके हात धुने प्रकियालाई केही छिटो बनाइदिन्छ।“
ब्रिटेनको यूनिभर्सिटी अफ केन्टकका प्राध्यापक मार्टिन मिकएलिसले पानी एक्लैले भने भाइरसलाई निस्तेज पार्न नसक्ने बताउँछन्। उनले भनेः “खाना पकाउँदा जसरी हातमा तेल लागेमा पानीले मात्र धुँदा जाँदैन र साबुन लगाउनुपर्छ, कोरोनाभाइरसको हकमा समेत त्यस्तै हो।“स्यानिटाइजरहरूको व्यापक प्रयोगले हात धुने कामको प्रभावकारिता भने केही छायामा परेको छ। गिलबर्ट भन्छन्, “तपाईँ दिनभर घरमै हुनुहुन्छ र आसपासमा मानिसहरूको आउजाउ छैन भने चर्पी गएपछि वा खान पकाउनुअघि बाहेक अन्य समयमा हात धोइरहनु आवश्यक पर्दैन।“ “स्यानिटाइजरको आवश्यकता साबुनपानी उपलब्ध नहुने ठाउँका लागि मात्र हो।“ त्यसो भए हामीले कति समयको अन्तरालमा हात धुने गर्नुपर्छ? महामारीको सुरुतिर धेरैजसो मानिसहरू घरभित्रै भएपनि छिटो छिटो समयमा हात धुनुपर्छ भन्ने थिये । तर निश्चित समयको फरकमा हात धुने भन्दा पनि अवस्था हेरेर हात धुने अन्तराल निर्धारण गर्नुपर्छ। ह्यान्डवास कि साबुनपानी? सामान्यतः साबुनका तुलनामा ह्याण्डवासहरू सजिलो र कम झण्झटिलो हुने भन्दै मानिसहरूको आकर्षण त्यसतर्फ हुने गरे पनि त्यो सही नभएको प्राध्यापक मिकएलिस बताउँछन्। ह्याण्डवासको धेरै प्रयोगले हामीमा भविष्यमा समस्या समेत देखिने जोखिम हुने उनले बताए । हालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएअनुसार विश्वमा महामारी सुरु हुनुअघि प्रत्येक पाँचमध्ये दुई स्कुलमा मात्र पर्याप्त हात धुने सुविधा उपलब्ध रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।